पूँजी बजारमा सुधार जारी
काठमाडौं, भदौ २५ । यस साता पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेसहित कारोबार परिमाणमा पनि सामान्य सुधार आयो ।
सुपारीको पातको खपटाबाटै बन्छन् यस्ता अर्ग्यानिक प्लेट, उद्योग नै स्थापना (भिडियो)
झापा, भदौ २५ । झापाका स्थानीयले सुपारीको पातको खपटाबाट आम्दानी गर्न थालेका छन् । सुपारीको खेर गइरहेको पातको खपटाबाट प्लेट र दुना–टपरी बनाएर बिक्री गर्दै स्थानीयले आम्दानी गर्न थालेका हुन् ।
गोलभेडा खेतीबाट वार्षिक पाँच लाखसम्म आम्दानी
पाँचथर, भदौ २५ । पाँचथरको उत्तरी क्षेत्रका किसानले गोलभेडा खेतीबाट मनग्ये आम्दानी गर्न थालेका छन् । अमरपुर, पञ्चमी, नागीलगायत गाविसका किसानले व्यवसायिक गोलभेडा खेती गरेर वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् ।
झारपातबाट यसरी बालियो बिजुली बत्ती, २५० घरधुरीमा वितरण गरिने (भिडियोसहित)
रौतहट, भदौ २५ । जंगलमा खेर गइरहेका झारपात र काठदाउराका टुक्रा प्रयोग गरी रौतहटको कनकपुर गाविसस्थित सिम्री गाउँमा बिजुली बत्ती बालिएको छ । जिल्ला विकास समिति गौर, गरिबी निवारण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा ग्यासिफायर प्लान्ट प्रविधिबाट बिजुली बत्ती निकालिएको हो ।
फिदिम बजारका मासु पसलहरु बिनादर्ता सन्चालित, बन्द गर्ने चेतावनी
पाँचथर, भदौ २४ । पाँचथर सरदमुकाम फिदिम बजारमा रहेका मासु पसलको शुक्रबार अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनकाक्रममा अधिकांश मासु पसलहरु मापदन्डविपरीत सन्चालन भइरहेको पाइएको अनुगमन समितिका संयोजक तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बस्नेतले बताए ।
काठमाडौं, भदौ २४ । शुक्रबार सुनको मूल्य सामान्यदरले ओरालो लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पच्छ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेर ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
भारततर्फ अदुवाको निकासी खुल्यो
इलाम, भदौ २४ । दुई सातादेखि भारततर्फ निकासी हुन रोकिएको अदुवाको निकासी शुक्रबारदेखि सुचारु भएको छ । विषादी हालेको फेलापरेको र चिनियाँ अदुवासमेत मिसावट गरेको भन्दै भारतीय व्यापारीहरुले अदुवा लैजान बन्द गरेका थिए ।
‘अबको २० दिनभित्रमै घर बनाउन दुई लाख वितरण गरिन्छ’
काठमाडौं, भदौ २४ । सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडितहरुको आवास निर्माण गर्न सरकारले छुट्याएको रकम अबको २० दिनभित्रमै वितरण गरिने दाबी गरेका छन् ।
कोरिया र इजरायल पनि निःशुल्क पठाउनुपर्ने ! यस्तो छ आइएलओको प्रस्ताव
काठमाडौं, भदौ २४ । दुई देशका सरकारबीचको सम्झौताको आधारमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको हकमा पनि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दिए राजीनामा
काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले राजीनामा गर्न दबाब दिँदै आएपनि उनले राजीनामा नदिने भन्दै आएका थिए ।
पशुको गर्भ रहे/नरहेको ३० दिनमै पत्ता लाग्ने
चितवन, भदौ २४ । पशुको गर्भ रहे/नरहेको ३० दिनभित्रै पत्ता लगाउन सकिने भएको छ । राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरका प्रमुख डा. माधवप्रसाद आचार्यकाअनुसार रगत र दूधबाट हर्मनको लेबल हेरेर गर्भाधान भए/नभएको पत्ता लगाउन थालिएको हो ।